मंगलवार बुधग्रह तुला राशीमा प्रवेश गर्दै : कुन राशीलाई फाइदा,कसलाई छ खतरा ? « Janata Samachar
मंगलवार बुधग्रह तुला राशीमा प्रवेश गर्दै : कुन राशीलाई फाइदा,कसलाई छ खतरा ?
काठमाडौं । मंगलवार अर्थात २२ सेप्टेम्वरका दिन बुध ग्रहले राशी परिवर्तन गरी तुला राशीमा प्रवेश गर्दैछ । यसरी बुध ग्रहले राशी परिवर्तन गर्नाले वृष, कर्क, कन्या मकर र मीन मीन राशी हुनेलाई फाइदा पुग्नेछ । तर मेष, मिथुन, सिंह, तुला, वृश्चिक, धनु र कुम्भ राशी हुनेले भने अलिे सावधानी अपनाउनुपर्ने हुन्छ ।
ज्योतिषशास्त्रीहरु अनुसार तुला राशीमा बुध प्रवेश गर्दा यसले व्यापार व्यवसायमा उतारचढाव आउनेछ । त्यसैले मंगलवार अर्थव्यवस्थामा सुधार हुने सम्भावना रहेको छ । उनी,सुती र कपासले बनाइएका कपडाको मूल्य बढ्नसक्नेछ । तरकारी बजारमा पनि यस ग्रहको प्रभाव पर्नेछ । तुलनात्मक रुपमा तरकारी व्यापारमा मन्दी आउने सम्भावना छ । मंगलवार मुलुकको राजनीतिक क्षेत्रमा अस्थिरता देखिने योग छ । देशका केही स्थानमा भारी वर्षा हुने सम्भावना रहेको छ भने केही ठाउँमा तीव्र गतिमा हुरीबतास आउनेछ ।
कुम्भ सहित छ राशीका लागि शुभ समय
तुला राशीमा बुध प्रवेश गर्नाले वृष, कर्कट, कन्या, मकर र मीन राशीका लागि राम्रो समय छ । यस राशीका व्यक्तिहरुको व्यापार व्यवसायमा लाभ हुने योग छ । स्वास्थ्यका लागि समेत उपर्युक्त दिन रहनेछ ।
७ राशीका व्यक्तिले भने सावधान रहनुपर्छ
बुधको राशी परिवर्तन हुँदा मेष, मिथुन, सिंह, तुला, वृश्चिक, धनु र कुम्भ राशी हुनेहरुका लागि अलि कठीन समय रहनेछ । त्यसैले मंगलवार यी राशी हुनेले विशेष सावधान रहनुपर्छ । कामकाजमा बाधा उत्पन्न हुने र विवाद बढ्नसक्ने योग छ । फजुल खर्च हुनुका साथै स्वास्थ्यमा समेत केही गडबढी देखिनसक्नेछ । मंगलवार यी राशी भएका व्यक्तिहरुले काम गर्दा हतार गर्ने वा लापारवाही गर्नै नहुने योग छ ।
यात्रामा सास्ती मिल्नेछ । बढी जिम्मेबारी थपिनेछ । पारिवारिक किचलो आउनेछ ।
स्वास्थ्यमा सुधार हुनेछ । मुद्दामामिला किनारा लाग्नेछन् । वादविवादको सामना गर्नुपर्नेछ ।